FontSpark waa shabakad si aad u heshid dhiirigelinta xarfaha mashaariicda | Hal-abuurka Online
Raadi il is aqoonsanaysa, waa mid si fiican u cad oo laga sooci karo kuwa kale, inta badan ma fududa. Taasi waa, waxaa jira farmo badan oo aan wada ognahay kuwaas oo si fiican loo isticmaali karo si loo dhigo barta tayadaas, laakiin kuwa kaamilnimada leh waxay had iyo jeer raadiyaan wax dheeraad ah.
FontSpark waa shabakad noo soo caawisa si aan u helno ishaas ku habboon mashruuc gaar ah. Ma aha qalabka kaliya ee shabakadaha shabakadaha, laakiin waa mid kale oo la isticmaalo marka aan u bilowno shaqo cusub macmiilka.
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan FontSpark waa habka ay naga dhigayso eeg farta ugu habboon mashruucaas cusub. Taasi waa, waxay ina waydiin doontaa oo kaliya erey gaar ah ka dibna sifooyinka aan dalbaneyno ishaas la raadinayo.
Waxayna wax walba u qabataa hab is-dhexgal leh oo siinaya khibrad isticmaale oo weyn. Waxaan galeynaa FontSpark iyo waa inaan wax ku qornaa uun. Xaaladdan oo kale, erey kasta oo lagu bilaabo abuurista dhammaan noocyada ilaha kuwaas oo aan ku dhiirigelin karno.
Laakiin waxaan sii socon karnaa innagoo gujinaya icon settings. Halkaas ayaan ku dooran karnaa nooca farta iyo miisaankeeda labadaba. Sidan waxaan ku siin doonaa tilmaamo badan oo ku saabsan waxa aan raadineyno si aad u bilowdo inaad na siiso fikradaha saxda ah si aad hadhow ugu qaadato blogyada, ecommerce iyo boggaga macaamiisha.
Waxay kaloo noo ogolaataa toos u aad isha laga bilaabo badhanka lagu tilmaamay qaybta hoose iyo dhanka midig ee diiradda ugu weyn ee barnaamijka shabakadda FontSpark; Haa, waxa ay ku dhamaataa .app-ka oo runtii waa waxa Google-ku u bilaabay domains-yadan: apps webka.
FontSpark waxay noqotaa qalab inaad had iyo jeer gacanta ku hayso si aad u raadiso dhiirigelinta, markaa waxay durba qaadanaysaa wakhti si loo badbaadiyo kuwa ugu cadcad; ha ka maqnaan xarfahan Google Fonts.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » FontSpark waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato qaabka ugu fiican ee aad u raadineyso mashruucaaga